Somalia Archives - Page 177 of 217 - Puntland Mirror Believable Media Website
October 18, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirkii hore ee gaashaandhiga Soomaaliya Janaraal Maxamed Siciid Xirsi oo loo yaqaan (Moorgan) ayaa u muuqda in uu noqon doono xubin aqalka sare ah kadib markii mid kamid ahaa nimanka la loolamaya uu […]
Wasiirka deegaanka: Ma jiro haba yaraatee wax heshiis ah oo dowlada Puntland iyo maamulka Galmudug dhexmaray
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dowlada Puntland ayaa ka hadashay wada-hadalo dhawaan dhexamaray masuuliyiinta Puntland iyo Galmudug. Wasiirka deegaanka Puntland Cali Cabdulaahi Warsame oo la hadlay warbaahinta maxaliga ah ayaa sheegay in aysan jirin wax heshiis ah oo […]
Cadaado-(Puntland Mirror) Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa xaqiijiyay in ay wada-hadal yeesheen madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayna wada-gaareen heshiis hordhac ah oo lagu joojinayo colaadada magaalada Gaalkacyo laguna bilaabayo wada-hadalo dhexmara labada […]
October 17, 2016 Abdi Omar Bile 0
Jowhar-(Puntland Mirror) Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hir-Shabeelle ayaa doortay madaxweynahoodii ugu horeeyay. Tilaabadaan ayaa imaanaysa labo asbuuc kadib markii la asaasay maamulkaas. Doorasho lagu qabtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa baarlamaanka maamul goboleedka […]
October 17, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo kan Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa khadka taleefoonka uga wada-hadlay shalay oo Axad ahayd xaalada magaalada Gaalkacyo, sida ay sheegeen ilo-wareedyo. Labada madaxweyne ayaa isku raacay in […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha degmada Godob-jiiraan Yuusuf Maxamed Faarax ayaa ka badbaaday rasaas qori oo ay la beegsadeen dablay aan la aqoon. Dhacdada ayaa fiidnimadii Axada ka dhacday makhaayad kutaala degmada, sida uu sheegay guddoomiyaha. “Waxaanu […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa xiray wargeys sidoo kalena xabsiga dhigay tifaftirihii wargeyska, sida shalay oo Axad ahayd ay sheegeen ururka suxufiyiinta Soomaaliya. Ciidamada sirdoonka ayaa habeenimadii Sabtida weeraray xafiisyada Xog Ogaal, iyaga oo […]
October 16, 2016 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay qabsatay diyaarada aan duuliyaha lahayn kadib markii ay ku burburtay deegaan u dhow magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya. Ma cadda waxa […]
October 16, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowlada Puntland ayaa maanta oo Axad ah faafiyay magacyada murashaxiinta u tartamaya aqalka saree e Soomaaliya si ay dowlada federaalka Soomaaliya ugu matalaan Puntland. Guddoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi oo saxaafada maxaliga […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Waraaqo rasmi ah oo uu diray wakiilka Qaramada Midoobay ee xoghayaha guud ahna madaxa howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) Ambaasadoor Michael Keating aya lagu sheegay walaac khatar ah oo laga qabo qaybo […]
« 1 … 176 177 178 … 217 »
President Uhuru Kenyatta and his Somalia counterpart Hassan Sheikh Mohamud on Tuesday held bilateral talks at State House, Nairobi. The talks between the two Presidents focused on the decision to close the Dadaab refugee camp, [...]
Muqdisho-(Puntland Mirro) Afar shaqaalaha gargaarka ah oo u shaqaynayay haayada caafimaadka aduunka ee WHO ayaa waxaa afduubtay maleeshiyo katirsan Al-Shabaab. Shaqaalaha oo Soomaali ah, ayaa lagu afduubtay gudaha degmada Luuq ee gobolka Gedo gelinkii dambe [...]